I-Hebei Runfeng cryogenic Equipment Co, Ltd.ibhizinisi elisha lobuchwepheshe obuchwepheshile ekwakhiweni, ekwenziweni nasekucwaningeni kwemikhumbi yengcindezi esezingeni eliphansi. Imikhiqizo ehamba phambili yenkampani ngamabhodlela afakwe ukushisa okushisa okuphansi, amathangi wokugcina anezinga lokushisa okuphansi, i-D1, imikhumbi yengcindezi ye-D2 neminye imikhiqizo. Okukhipha minyaka yonke amabhodlela asezingeni lokushisa okuphansi kungaphezu kuka-40000, nokuthi amathangi okugcina angaphezulu kuka-2000. Le nkampani inemishini emikhulu yokugoqa ipuleti egoqa umshini, ukulawula izinombolo okuzenzakalelayo ngokugcwele komshini wokugoqa amapuleti amane, ukuzilawula kwamanani okuzenzakalelayo kwe-longitudinal seam , umshini wokuwelda womsila oyindilinga, umshini wokupompa umshini, umshini wokugubha we-CNC, ukufafaza kwe-electrostatic, umtshina we-helium mass spectrometer ovuza, i-spectrum analyzer, umtshina othomathikhi we-ultrasonic flaw, umtshina we-magnetic powder, i-X-ray digital imaging system kanye neminye imishini yokukhiqiza nokuhlola. Le nkampani inabasebenzi abangaphezu kuka-200, kufaka phakathi abantu abangaphezu kuka-50 abaneziqu zasekolishi noma ngaphezulu, abantu abangaphezu kwama-30 abaneziqu ze-bachelor noma ngaphezulu, abangaphezu kuka-20 abanobuchwepheshe obuphezulu kanye nonjiniyela, abanamandla amakhulu wobuchwepheshe kanye nohlelo lokuqinisekisa ikhwalithi ephelele. Inkampani itshala imali eningi ngonyaka ukuze ithuthukise futhi ivivinye ubuchwepheshe obusha nemikhiqizo emisha. Lwela ukudala ibhizinisi elijwayelekile embonini yezinga eliphansi lokushisa.
I-1983 Runfeng Enterprise yasungulwa
I-Runfengfeng Enterprise yasungulwa ngo-1983. Kusukela yasungulwa, isungule izinkampani ezi-4 zilandelana ukuze zakhe amandla aqine kakhulu asebenzela imboni yesimanje, futhi ithuthukise ngokuqinile futhi ilinge ukusungula. Yimishini i-Runfeng Mechanical and Electrical, i-Runfeng Machinery, i-Runfeng Container ne-Runfeng Commercial Concrete ebeke itshe lesisekelo lokufeza inhloso yokwakha inkampani.
I-2004 Runfeng Electromechanical yabhaliswa futhi yasungulwa
I-Runfeng Electromechanical yabhaliswa futhi yasungulwa ngo-2004. Ibhilidi lehhovisi lebhizinisi lingamamitha-skwele angama-8,000 kanti ishede liyi-20,000 square metres. Le nkampani igxile kakhulu ekushintsheni kagesi okuphelele nokuthengisa, amafeni, amaphampu wamanzi, amathuluzi wehadiwe, kanye nezinhlelo zokuhambisa amandla ezenzakalelayo. Futhi usungule ubudlelwano bokubambisana besikhathi eside nabakhiqizi basekhaya abaziwayo.
2005 Runfeng Imishini yabhaliswa futhi yasungulwa
Imishini i-Runfeng yasungulwa ngo-2005 ukuhlinzeka amakhasimende ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme ngokukhiqiza nokufaka amakhabethe wokusabalalisa amandla kagesi asezingeni eliphansi, okokufaka izinto ebhokisini, amasistimu wokushisa, amasistimu wokuphakelwa kwamanzi, imishini yokuphakamisa izinto, izinto zokuphakamisa izinto, nemishini eyenziwe ngezifiso.
Imishini ye-2012 Runfeng cryogenic yasungulwa
Imishini ye-Runfeng cryogenic yasungulwa ngonyaka ka-2012. Le nkampani igxile ekwakhiweni nasekukhiqizweni kwemikhumbi yengcindezi, amathangi okugcina, amasilinda kagesi wemvelo, amasethi aphelele ezinsiza zegesi, okokusebenza kwegesi yezimboni, izinhlelo zokuphakelwa kwamalahle kuya kwegesi, iziqukathi ezijwayelekile, neziqukathi ezinemba kakhulu.
2012 Runfeng Commercial Concrete yasungulwa
I-Runfeng Commercial Concrete yasungulwa ngonyaka ka-2012. Le nkampani inezintambo ezimbili zokukhiqiza ezingamakhulu ayisishiyagalombili nezikhiqiza ukhonkolo wentengiselwano ngonyaka. Le nkampani isekela amaloli ama-mixer amaningi namaloli amaphampu angamamitha angama-49.
Inhloso yesevisi ye-Runfeng
I-Runfeng inabasebenzi abangaphezu kwama-300, onjiniyela abangama-41, nabasebenzi abangaphezu kuka-70 abathengisayo. Ngaphansi kokuphathwa kwabantu baseRunfeng, kusuka koqobo olulodwa ukuqedela imishini, kusukela ekuhleleni ukuhlela ukufakwa nokwakhiwa esizeni, kusukela ekuhlangenwe nakho kwensizakalo yokuthengisa kuya kusevisi ephelele yokuthengisa ngemuva, abantu baseRunfeng baphikelela ekusebenziseni amabhizinisi amaningi ukuze babone iphupho lamaShayina njengelabo umsebenzi.